အစိုးရသတင်းစာများ ရပ်ဆိုင်းရေး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တင် | ဧရာဝတီ
အစိုးရသတင်းစာများ ရပ်ဆိုင်းရေး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တင်
ခင်ဦးသာ| November 21, 2012 | Hits:75
7 | | အစိုးရက ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု သတင်းစာဆိုပြီး ထုတ်စရာ မလိုဘူး။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ထုတ်ဝေခွင့် ပြုလိုက်ရင် အစိုးရ သတင်းစာက ထားဖို့မလိုဘူး (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှု ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်နေသည့် အစိုးရထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများကို ရပ်ဆိုင်းရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ တင်ပြ တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနအတွင်း ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ယခုအခါ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများအား ရပ်ဆိုင်းသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က တင်ပြခဲ့သည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ပြောင်းချိန်တွင် သတင်းစာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ မြှင့်တင်နေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ အတိတ်ကာလကို ပြန်ကြည့်ပါက ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနသည် သတင်းစာ ထုတ်ဝေမှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများအား ယခု လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း ဦးသိန်းညွန့်က ထောက်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၎င်းက “အလွဲသုံးစားမှုတွေအပြင် လွှတ်တော်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်း အနည်းအကျဉ်းပဲ ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်၊ ဒီတော့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုပဲ မြှင့်တင်ပေးသင့်တယ်။ အများပြည်သူရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုပြီး ဆောင်ရွက်မယ့် ကိစ္စကိုလည်းပဲ ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
အစိုးရပိုင် သတင်းစာများ ရပ်ဆိုင်းရန် လွှတ်တော်၌ တင်ပြဆွေးနွေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ အနေဖြင့် မည်သို့မျှ ပြောဆိုလမ်းညွှန်မှု မရှိသေးကြောင်း မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက် မန်နေဂျာ ဦးဝေဖြိုးသန်းက ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် အစီစဉ်မရှိဟု ယူဆကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများကို ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု သတင်းစာများ အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မီဒီယာဂရုပ် (ပ်) ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးကိုကို (စက်မှု) က ပြောသည်။
“နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အများကြီး လုပ်ထားတော့ လောလောဆယ်မှာ ရပ်ဆိုင်းမယ့် အစီအစဉ်ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ ပုံနှိပ်စက်တွေလည်း လုပ်ထားတော့ ပုံစံအသစ်နဲ့ပဲ ဆက်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းနေသည့် အချိန်တွင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများအနေဖြင့် အာဏာရ အစိုးရ၊ ပါတီ တရပ် အတွက်သာ ၀ါဒဖြန့်သော သတင်းစာအဖြစ် မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူများ သိသင့်သိထိုက်သော၊ ပြည်သူများအပေါ် ထင်ဟပ်စေမည့် အကြောင်းအရာများကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာ ဖြစ်သင့်ကြောင်းလည်း ဦးကိုကိုက ပြောသည်။
အစိုးရထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများအား ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာများအဖြစ် အသွင်သစ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဟု ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာက မကြာသေးခင်က ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အရောင်အသွေး စုံလင်စွာဖြင့် ထုတ်ဝေနေသော်လည်း စာအရေးအသားများမှာမူ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသည်။
ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်း၊ The New Light of Myanmar သတင်းစာများကို ဦးစီးထုတ်ဝေနေသည့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနအတွင်း ငွေကြေး ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် အလွဲသုံးစားမှု လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်က ပြီးခဲ့သည့် မတ်လအတွင်း စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ထို ငွေကြေး မသမာမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သိန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်အနက် ၁၀၀၀ ကျော်သာ ပေးသွင်းထားကြောင်း မတ်လအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။ ထိုငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှုကြောင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်မှ တာဝန်ရှိသူ ၃ ဦးအား ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက အရေးယူခဲ့သည်။
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုသည် ယခင်ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်း လက်ထက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးကျော်ဆန်း နေရာတွင် ဦးအောင်ကြည်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် တာဝန်ယူပြီး မကြာမီတွင် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများကို အများပြည်သူ ၀န်ဆာင်မှု သတင်းစာများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲမည်ဟု ကြေညာပြီး ရောင်စုံ သတင်းစာများ အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ တစောင်ဖြစ်သည့် ကြေးမုံ သတင်းစာသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် သတင်းစာအဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပြည်သူပိုင်အဖြစ် သိမ်းယူ၍ ထိုအချိန်မှ ယနေ့အထိ အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့် သတင်းများကိုသာ ရေးသားလျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး အပါအ၀င် ၀န်ကြီးဌာနပေါင်း ၁၅ ခုသည် ကျပ်ငွေဘီလီယံ ၆၀ ၀န်းကျင် ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှု၊ ငွေစာရင်း မမှန်မကန် ဖော်ပြမှုများအား ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက နှစ်ကြိမ်တိုင် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုငွေများကို အချိန်ကာလတခုအတွင်း ပေးသွင်းရန်အတွက် ယမန့်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ခြေအဆင့် ၀န်ထမ်းတချို့ကို အရေးထားသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ကြောင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး အဆင့်ရှိသူ တချို့ကို ဌာနပြောင်းရွှေ့ပေးထားသည်ကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာတွင် ပါရှိကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
၀န်ကြီးဌာနများ၏ ငွေကြေးအလွဲသုံးမှု ကိစ္စများကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၌ အကျယ်တ၀င့်ရေးသား ဖော်ပြပေးခြင်း မရှိပေ။
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website swe htwe November 22, 2012 - 1:20 am	That’s right. Go ahead. We support this issue.
Reply	mgoogyaw November 22, 2012 - 2:25 am	Wrong, Myanmar Ahling,newspaper is not published on 1993. It was very early than that date. Actually date of Myanmar Ahling,publishing,sincerely, I don’t know. But, I know that it is not start published on 1993.
Reply	ဖိုးချစ် November 22, 2012 - 10:35 am	နအဖလက်ထက်တွင်ဝန်ကြီးအဆင့်မှဉီးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအထိစစ်အစိုးရက
ငွေမည်း၊ ညစ်ငွေ၊ ခိုးငွေများကိုသိမ်းကြုံးထည့်ယူခဲ့ကြသည်။ထိုစဉ်ကနအဖ၏စည်း
Reply	ko ye November 22, 2012 - 11:08 am	နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာတွေထုတ်ဝေမှု မရပ်ဆိုင်းသင့်ပါဘူး။ ဒါကိုမှီခိုနေရတဲ့ဝန်ထမ်း မိသားစု တွေကိုဦးစွာစဉ်းစားပါ။ငွေကြေးအရင်းအနှီးမြောက်မြားစွာနဲ့လည်ပတ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ ပုဂ္ဂလိကကိုလွှဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ၀န်ထမ်းတွေအတွက်အာမခံ ချက် ပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းကိုရောင်းချသင့်ပါတယ်။ ယနေ့သတင်းစာတွေဟာတစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိနေပါပြီ။ လွှတ်တော်မှာပြောကြဆိုကြတာလွယ်ပါ တယ်။ ပြောတိုင်း လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် တချို့ကိစ္စတွေမှာ ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကိုလဲစဉ်းစား သင့်ပါတယ်။
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ တကယ်တန်းပြောဆိုနေကြ တာတွေကို ထောက်ခံ ပါတယ်။အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေမှ တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထက်အဆင့်ဆင့်မှာလဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောလွှတ်တော်ကြောင့် ဒီလိုမျိုး ဆုံးရှုံးနေတဲ့ငွေကြေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုကြိုဆိုပါတယ်။
Reply	FOX November 22, 2012 - 3:03 pm	ကောင်းပါတယ်… သို့ပေမယ့် အလဲဗင်းလိုမီဒီယာလိုမျိုးလက်ထဲတော့မပေးသင့်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်… အလဲဗင်းရဲ့ဆောင်းပါးတော်တော်များများဟာ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း တိုက်ရိုက်သော်၎င်း ပြည်သူတွေကိုလှူံ့ဆော်စာတွေပါနေတယ်… သွေးစည်းမှုကိုအခြေမခံထားတဲ့အတွက်မပေးသင့်ပါ… Reply	swe htwe November 22, 2012 - 8:40 pm	I don’t agree to you,fox. Your intention is ery dirty. Our readers are not idiots. Eleven stand for the country.
Reply	Aung Bu November 22, 2012 - 10:12 pm	Not too stranger.It is very small amount compare with previous government.
Reply	မောင်မောင်ကျော်ဝင်း November 24, 2012 - 3:12 am	စားလို့ဝါးလို့ဝပြီးအငြိမ်းစားယူသွားကြကုန်သောဉပဒေအထက်ကပုပ်ကိုယ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုအရေးယူပေးမလဲသိလိုပါသည်။ယခင်ကပေါင်းစားခဲ့ပြီးအတော်ချမ်းသာနေကြတဲ့လွတ်တော်ထဲက
Reply	မင်းမင်း November 24, 2012 - 8:40 am	သတင်းညာတွေထုတ်ပြီးပိုက်ဆံတွေဘုံးတဲ့ခေတ်ကုန်သွားပြီလေ။ဆက်ပြီးညာ၊ဆက်ပြီးဘုံး